ရိုးမား-လီဗာပူးပွဲအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးအင်အားတင်းကျပ်စွာချထား ၊ အကောင်းမြင်သောအပြုအ?? - Yangon Media Group
ရိုးမား-လီဗာပူးပွဲအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးအင်အားတင်းကျပ်စွာချထား ၊ အကောင်းမြင်သောအပြုအ??
ရိုးမားနှင့်လီဗာပူးတို့ ရင်ဆိုင်ကစား ကြမည့်ချန်ပီယံလိဂ် ဆီမီးဖိုင်နယ်ဒုတိယ အကျော့ပွဲစဉ်အတွက် ရောမမြို့တစ်မြို့ လုံးတွင် လုံခြုံရေးအင်အားတင်ကြပ်စွာ ချထားရကြောင်းသိရသည်။
မတ်လ ၂ ရက်နေ့ (ယနေ့)ညတွင် ရင်ဆိုင်ကစား မည့်အဆိုပါပွဲစဉ်အတွက် ရောမမြို့သို့ လီဗာပူးပရိသတ် ၃၅ဝဝ ခန့် လိုက်ပါ အားပေးမည်ဖြစ်ရာ ရောမမြို့မှဆိုးသွမ်း ပရိသတ်များနှင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွါးမည်ကို စိုးရိမ်ရခြင်းကြောင့် ရောမမြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အား ၂ဝဝဝ ကျော်ခန့် လုံခြုံရေးယူ စောင့်ကြပ်နေရခြင်းဖြစ်သည်။
လီဗာပူးအသင်းသည် အိမ်ကွင်း တွင်ကစားခဲ့သည့် ပထမအကျော့ပွဲစဉ်၌ ရိုးမားကို ၅-၂ ဂိုးဖြင့် ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ရထားသောကြောင့် နောက်တစ် ဆင့်သို့တက်ရောက်ရန် ရေပန်းစားနေ သော်လည်း ရိုးမားအသင်းကိုအားပေး သည့့်ူအမေ ဆိုးသွမ်းပရိသတ်များရန် ကြောင့် စိုးရိမ်ရသည့်အနေအထားတွင် ရှိနေသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် ရောမမြို့ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အိုလံပီကိုကွင်းနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်အပြင် သတင်းပေးမှုများ အရ ဆိုးသွမ်းပရိသတ်များ ကျက်စားလေ့ ရှိသည့်နေရာများ၊ လူစည်ကားသည့်နေ ရာများကို လုံခြုံရေးယူစောင့်ကြပ်လျက် ရှိပြီး လီဗာပူးအသင်းကလည်း ရောမ မြို့သို့လိုက်ပါအားပေးမည့် ပရိသတ်များ အနေဖြင့် အသင်းအမှတ်တံဆိပ်အလံ များကိုင်ဆောင်၍ မြို့အတွင်းလှည့်လည် လျှောက်သွားခြင်း၊ အုပ်စုဖွဲ့ကာ သီချင်း များအော်ဟစ်ခြင်းမပြုလုပ်ရန် အသိပေး ထားကြောင်းသိရသည်။ လီဗာပူးနှင့် ရိုးမားတို့ရင်ဆိုင်ကစားခဲ့ကြသည့် ဆီမီးဖိုင် နယ်ပထမအကျော့ကလည်း နှစ်ဖက် ပရိသတ်များခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့ပြီး ၁၉၈၄ ဥရောပဖလားဗိုလ်လုပွဲတွင် ရင် ဆိုင်ကစားစဉ်လည်း နှစ်ဖက်ပရိသတ် များ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြဖူးသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ရိုးမားအသင်း ၏အားကစားဒါရိုက် တာမွန်ချီကလည်း ရိုးမားပရိသတ်များအနေဖြင့် လီဗာပူး နှင့်ပွဲတွင် အပြုသဘောဆောင်သည့် အပြုအအမူများဖြင့်သာ အားပေးကြရန် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။ မွန်ချီက ”ရောမမြို့ကြီးကို အနီနဲ့ အဝါရောင်တွေ အလှဆင်ထားတာ ကျွန်တော်နှစ်သက်ပါ တယ်။ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ကွင်းထဲက ထိုင်ခုံတွေပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး ရိုးမားအသင်း အလံတွေကိုင်ထားခြင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာ ကိုပြသနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ အားလုံးပြောနေကြတာက ရောမမြို့ရဲ့ ရန်ပွဲတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးမား ပရိသတ်တွေ ရန်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန် တော်တို့ ထုတ်ပြရမှာပါ”ဟု တောင်းဆို သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၁၂၆ လမ်းတွင် အဲယားကွန်း Safe Guard အပူလွန်ရာမှ မီးလောင်